I-Alpha Dayz Hack 🥇 Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Alpha Dayz lomnqweno yimfumba
Sebenzisa i-DayZ Alpha Hack yethu phantse yindlela eqinisekisiweyo yokufumana impumelelo kulo mdlalo.
Ngaba ufuna ukuziva ukuba kunjani ukulawula abachasi bakho? Thenga isitshixo semveliso yosuku olunye-namhlanje!
Ukuba uyakuthanda oko kufuneka sikunike, fumana ukufikelela ixesha elide! Thenga isitshixo seMveliso yeVeki e-1 namhlanje!
Ngamanye amaxesha kufuneka uzinikezele kubugcisa bokukhangela. Thenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje!
Zininzi izinto eziguqukayo eziya empumelelweni
Ngexesha lokuzonwabisa kwakho kwe-DayZ, kunye nokusebenzisa i-DayZ Alpha Hack yakho kuya kuthintela iingxaki ohlangabezana nazo. Nokuba ziZombies okanye abadlali bokwenyani, ukusebenzisa isixhobo sethu kuya kukugcina ukhuselekile.
Ulwazi lweDayZ Alpha ulwazi
Le DayZ Alpha kugula ilungiselelwe ngokupheleleyo ukuba ikukhonze ngokuchanekileyo, nokuba ufuna ntoni ngayo. Olu qhekezo luza i-kernel ngokupheleleyo kwaye lubonisa imenyu ye-GDI, ikunike amava aphucukileyo kwaye alungiselelwe ngawo wonke umdlalo. Nangona le DayZ Alpha Hack iza kuza ne-HWID itshixiwe, ungathenga isofofer yeHWID kuthi apha kwiGamepron! Awufuni ukushiya izinto zide ziye kumdlalo onje ngeDayZ, kuba kukusinda kwezona zinamandla- yindoda yokugqibela (okanye umfazi!) Emi ngokusebenzisa iDayZ Alpha Hack yethu ukuhlala phambili.
Le DayZ Hack iza ixhotyiswe ngeempawu ezininzi zeDayZ Wallhack, ezinje ngeNtshaba ye-ESP (iSkeleton ESP), uLwazi lweNtshaba (umgama, iZombies), kunye neLoot ESP! I-DayZ Alpha Aimbot ibandakanya iAdjustable Aimbot Distance, kunye neAdjustable FOV Circle kunye neMowudi yokuThula; Inayo yonke into oyifunayo ukuze uchume.
Utshaba ESP (Bone)
Ulwazi lotshaba (umgama, iZombi)
Ukuphanga i-ESP (umgama; izixhobo)
Uhlengahlengiso lomgama weAimbot
I-Aimbot FOV ehlengahlengiswayo
Malunga noSukuZ Alpha
I-DayZ ngumdlalo wokuphila onokudlalwa nokuba wedwa okanye nabahlobo abambalwa, kuxhomekeke kuwe. Ukuqhekeka kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye konke okufuneka ukwenze kukuvula i-hack, usebenze umdlalo wakho, wenze ngokwezifiso izicwangciso, uze udlale! Unokukhetha ukusasaza ngokukhohlisa kusebenze, njengoko ababukeli bakho bengayi kuba nofifi lwento eyenzekayo; kukukhohlisa kwangaphandle ngokupheleleyo okungenakudlalwa kwiscreen esigcweleyo. Kuya kufuneka ukhuseleko lukhubazeke ngelixa usebenzisa i-DayZ Alpha, kungenjalo ayinakusebenza ngokufanelekileyo. Ifezekile xa ufuna ukufezekisa ubukhulu kwi-DayZ.
Kutheni usebenzisa iDayZ Alpha ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Kukangaphi uthenga i-DayZ Hack, ukuze uqonde ukuba uchithe imali yakho? Awusoze ufumane imveliso yokusilela xa uthenga kwiGamepron, kwaye kuyacaca ukuba abasebenzisi bethu bayayibulela loo nto! Uya kuhlala unezona mpawu zibalaseleyo unokuzikhathaza nge-DayZ nge-Gamepron, kwaye sikunika ubhetyebhetye ngokunikezela ngeendlela ezahlukeneyo ezahlukeneyo zexesha. Ukukopela kwethu akubonakali, ke akukho mfuneko yokuba uzibuze ukuba iakhawunti yakho isemngciphekweni ngelixa usebenzisa iiDayZ Hacks zethu!
Nguwe umdali wekamva lakho apha kwiGamepron, njengoko imenyu yethu yomdlalo ngokulula yeyona inomdla oya kuyifumana kwi-Intanethi. Uninzi lweehacks liza kukunyanzela ukuba wenze utshintsho kuseto lwakho ngaphambi kokuba uqalise umdlalo, oko kuthetha ukuba wakuba uwuvulile umdlalo, akukho kubuya mva! Ngombulelo, i-Gamepron itshintshe izinto zijikeleze ngokupheleleyo-ayisiyiyo kuphela yokwenza utshintsho ngelixa udlala, kodwa imenyu yethu yomdlalo ikwanokhetho oluninzi kunokuba unokufumana kwi-DayZ yeMveli yesiko. Lungisa isantya seAimbot yakho, zeziphi iindawo ongathanda ukujolisa kuzo, okanye ukhetho lwakho lwe-ESP.
A5. Hayi, obu buqhetseba abubandakanyi i-hwid spoofer. Sinikezela nge-hwid spoofer eyahluliweyo ye-Dayz
Fumana ezona zinto zibalaseleyo usebenzisa iDayZ Alpha ESP yethu, okanye thabatha nje abachasi bakho ngokungxama ngokwenza iDayZ Aimbot yethu ethembekileyo. UmdlaloPron unayo yonke into oyifunayo!
I-Excel kwaye ukhuphisane nabona badlali babalaseleyo ngeenxa zonke besebenzisa i-DayZ Alpha Hack!
Ilindelwe Lawula kunye noDayz Alpha wethu?